जनताको मन जित्न नसकेपछि सूचना विधेयक ल्याएको गगनको आक्रोश –
जनताको मन जित्न नसकेपछि सूचना विधेयक ल्याएको गगनको आक्रोश
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले काम गरेर जनताकोे मन जित्न नसकेपछि आलोचनाबाट जोगिन सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघले नागरिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने विधेयकहरु विरुद्ध विहिबार काठमाण्डौको माईतीघर मण्डलमा गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कमजोर सरकारले कानून बनाएरै जनताको मुख थुन्ने प्रयास गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विधेयक नपढीकनै विरोध गरिएको भन्ने विभागिय मन्त्रीको भनाई प्रति पनि आपत्ती जनाउनुभयो । विधेयकका सबै दफा दफामा आफु छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै उहाँले छलफल कहाँ गर्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले विधेयकका दफा दफामा छलफल गर्न विभागिय मन्त्रीलाई चुनौति नै दिनुभयो । उहाँले सुचनाको हकको अधिकार कुण्ठित गर्ने हो भने नेपालको संविधान क्युवा र उत्तर कोरियाको संविधान भन्दा भिन्न नरहने दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “यो विधेयकको धारा धारामा दफा, दफामा छलफल गर्न तयार छौ । माननीय मन्त्री ज्यूले भन्नुभएछ, विधेयक नपढीकन आयो । यो विधेयकमा कहाँ छलफल गर्ने मन्त्री जी ? सिंहदरबार गर्ने हो ? संसदमा गर्ने हो ? माइतीघर मण्डलामा गर्ने हो ? कि तिम्रो कार्यालय धुमबराही मा गर्ने हो ? प्रत्येक दफा दफामा , शब्द शब्दमा छलफल गर्न तयार छु । नपढीकन आएको होइन । पढेर, बुझेर आएको । हेप्ने हाम्लाई नपढीकन आयो भन्ने ?”
उहाँले प्रधानमन्त्री कमजोर भएर सरकारका कामकारवाहीप्रति सचेत जनताको मुख थुन्न गलत नियतका साथ विधेयक ल्याईएको दाबी गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणी र आलोचना सहने हिम्मत नभएपछि सरकारले जनताको बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने नियत साथ विधेयक ल्याएको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो ।
उहाले भन्नुभयो “प्रधानमन्त्री बलियो भएर आएको होइन । प्रधानमन्त्री लुते भएर आएको । प्रधानमन्त्री कायर भएर आएको हो यो । अस्वस्थ्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । म स्वास्थ्य लाभको कमना गर्छु । ”
विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरेको वहानामा मस्यौदामा ‘निरन्तर’ भन्ने शब्द मात्रै थप्ने काम भएको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
विरोधसभा अघि विद्यार्थीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने गरि विधेयक ल्याईएको भन्दै सूचना प्रविधि विधेयक खारेजीको माग गर्दे नाराबाजी सहित र्याली गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले सूचना प्रविधि विधेयक लगायत विवादास्पद विधेयकहरु फिर्ता गर्न माग गर्दै आएको छ ।
« सभापति भेलामा नेविसंघ नेताले दिए आमरण अनशनको चेतावनी
सूचना प्रविधि विधयक पास गर्नुपूर्व गुठी विधेक विरुद्ध माइतीघरमा जम्मा भएको जनसागरको स्मरण गर्न चेतावनी »